> Resource> Naghachi> Flash Kaadị Data Recovery: 3 Nzọụkwụ naghachi Data si Flash Kaadị
Flash kaadị bụ ụdị nke nchekwa na ngwaọrụ na-eme ka eji Flash ebe nchekwa technology ka ụlọ ahịa data. Nke a na ụdị kaadị e ọtụtụ-eji dijitalụ ngwaọrụ dị ka igwefoto dijitalụ, ekwentị, music ọkpụkpọ. CF kaadị, MMC kaadị, SD kaadị, Memory mkpisi xd kaadị niile bụ flash kaadị. Ọ bụ ezie na flash kaadị bụ a mma maka dijitalụ data nchekwa, ọ bụ ka ike izere data ọnwụ nsogbu. Flash kaadị data nwere ike furu efu ruru ka usoro njehie, mberede nhichapụ, mis-njikwa, virus ọrịa ma ọ bụ ihe ndị ọzọ. Mgbe ihu flash kaadị data ọnwụ nsogbu, ị kwesịrị flash data mgbake software inyere gị aka.
Wondershare Data Recovery for Mac Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery bụ otu nke kasị mma nhọrọ maka gị. Ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na ụdị nile nke flash kaadị. Ike kacha ike atụmatụ nke Wondershare Data Recovery bụ na ọ bụ ike naghachi a dịgasị iche iche nke faịlụ site na flash kaadị, gụnyere foto, video, ụlọ ọrụ akwụkwọ, Archive faịlụ, email, audio, wdg
Ị nwere ike ugbu a a ikpe mbipute naghachi data si flash kaadị.
Igosi Flash Kaadị File Iweghachite na 3 Nzọụkwụ
Ebe a ka na-usoro flash kaadị mgbake Mac na Wondershare Data Recovery for Mac. Naghachi flash kaadị data si Windows kọmputa, biko ibudata Windows version.
Nzọụkwụ 1 Họrọ Iweghachite ọnọdụ na Malite Flash Kaadị Data Recovery
Mgbe wụnye na-agba ọsọ Wondershare Data Recovery for Mac, ị ga-awa na 3 mgbake ụdịdị ịhọrọ site na. Ka na-agbalị "Echefuola File Iweghachite" ọnụ.
Cheta na: biko jikọọ gị flash kaadị na gị Mac ma hụ na ọ ga-ghọtara dị ka a ike mbanye na gị Mac.
Nzọụkwụ 2 Họrọ gị Flash Kaadị ka iṅomi maka Lost Data
A nzọụkwụ, usoro ihe omume ga-egosipụta niile ike draịva na gị Mac. Ị dị nnọọ mkpa iji họrọ otu maka gị flash kaadị na pịa "iṅomi" ịchọ furu efu faịlụ.
Rịba ama: "Kwado Deep iṅomi" dị ma ọ bụrụ na ị chọrọ inwe a mma scanning n'ihi ya, ma ọ na-ewe ogologo oge karịa nkịtị iṅomi. E wezụga, ị nwere ike nụchaa na scanning N'ihi site na-ahọpụta faịlụ ụdị ike iṅomi.
Nzọụkwụ 3 Preview Hụrụ Flash Kaadị Data na-agbake Files selectively
Na njedebe, niile hụrụ ọdịnaya ga-egosipụta na nchekwa ma ọ bụ ụdị faịlụ na n'aka ekpe. Ị nwere ike inyocha faịlụ aha ego ma ha bụ ndị ihe ị chọrọ iji weghachite ma ọ bụ. Plus, ị pụrụ ọbụna ịhụchalụ photos.
Mgbe ahụ, ị ​​dị nnọọ mkpa iji họrọ faịlụ na-agbapụta ha site na ịpị "Naghachi". Biko họrọ otu ọnọdụ zọpụta ndị natara faịlụ. Ọ dị mkpa na-ha na ndị ọzọ na ọnọdụ ndị ọzọ karịa na flash kaadị, n'ihi na data overwritten pụrụ iduga mgbake ọdịda.